🥇 VPN sugan oo la isku halleyn karo: 10ka VPN ee ugu sarreeya 2022
VPN ammaan ah
✅ VPN lacag la'aan ah
🥇 VPN-yada ugu fiican
VPN ee PC
Waad salaaman tahay VPN
Mar kasta oo ay yihiin Isticmaalayaal badan ayaa ka walaacsan ammaankooda (oo sidaas darteed xiiseynaya VPN) iyada oo ay sabab u tahay khatarta sii kordheysa ee internetka iyo kiisaska basaasnimada baaxadda leh ee noqday warbaahinta. Xitaa si ka sii badan waqtiyada masiibada ah, marka SARS-CoV-2 ay ku qasbaan qaar badan inay isgaadhsiinta, taas oo macnaheedu yahay maaraynta xogta xasaasiga ah ama shirkadaha gaarka ah ee shabakadaha guriga ee laga yaabo inaysan lahayn tillaabooyin ilaalin ganacsi.
VPN-ku kaliya kuma siin karo lakab dheeraad ah oo ammaanka ah oo loogu talagalay xafiiskaaga ama isku xirka gurigaaga, sidoo kale wuxuu kaa caawin karaa siyaabo kale. Tusaale ahaan, waxaad bedeli kartaa asalka IP-gaga sidaad rabto, adigoo awood u leh inaad doorato waddanka aad ka timid si aad u awooddo Helitaanka adeegyada xaddidan ama xaddidan dalkaagii hooyo. Wax sidoo kale soo jiita isticmaaleyaal badan, gaar ahaan baahinta adeegyada macluumaadka, VPN.
10ka VPN ee ugu sarreeya
Waxaa ka mid ah adeegyada vpn ugu fiican Waxaan ku talinaynaa Top10:
Isku day VPN
VPN qiimo jaban. Sifooyinkiisa gaarka ah waa:
IP-ga oo ka yimid 59 waddan
Xawaare dhakhso leh
6 qalab isku mar ah
U istaago dalacsiinteeda
Waxaa laga helayaa:
IP-ga oo ka yimid 90 waddan
7 qalab isku mar ah
Waxay u taagan tahay ammaankeeda
IP-ga oo ka yimid 61 waddan
Waxay u taagan tahay qiimaheeda
IP-ga oo ka yimid 94 waddan
5 qalab isku mar ah
Waxay u taagan tahay tayada adeeggeeda
IP-ga oo ka yimid 74 waddan
Waxay u taagan tahay tayada-qiimaheeda
IP-ga oo ka yimid 80 waddan
Lagu xusay xawaaraha
IP-ga oo ka yimid 22 waddan
Waxay u taagan tahay adeeggeeda farsamada
Dabada iga qari!
IP-ga oo ka yimid 190 waddan
10 qalab isku mar ah
Aad ugu fiican P2P iyo Torrent
IP-ga oo ka yimid 46 waddan
Ku habboon isticmaalka Netflix
IP-ga oo ka yimid 56 waddan
Ikhtiyaarka wanaagsan ee qoysaska
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato VPN
Kahor intaadan shaqaaleysiin VPN waxaad u baahan tahay inaad ogaato taxanayaal tafaasiil ah si aad u doorato midka ugu habboon baahiyahaaga iyo sidoo kale si loo go'aamiyo haddii aad runtii u baahan tahay adeegga VPN iyo in kale.
Una VPN (Network Private Private Network), ama shabakada gaarka ah ee loo yaqaan 'virtual private network', asal ahaan waa adeeg kuu ogolaanaya inaad ku xidho shabakad sida internetka si ammaan ah. Si taas loo sameeyo, qarsoodi ah asalka taraafikada shabakadda ayaa la isticmaalaa, waxay ku siinaysaa IP ka duwan kii asalka ahaa ee ay bixiso adeeg bixiyahaaga internetka (ISP).
Sidoo kale, VPN ayaa soo saari doonta "tunnel" xidhiidhinta taraafikada qarsoon, taas oo ah, dhammaan taraafikada xogta soo gasha iyo ta baxaysa waxaa ilaalin doona algorithm sir ah si qolo saddexaad aysan u dhexgelin iyaga qoraal cad iyaga oo isticmaalaya sniffers (sniffers baakidh shabakad) sida weerarrada nooca MitM (Man ee Dhexe), iyo xitaa waxay ka qarsoonaan doontaa adeegyada qaarkood iyo bixiyayaasha kuwaas oo qaban kara gaadiidkaaga oo kaydin kara.
Dhammaan kuwan kor ku xusan waxay leeyihiin qaar ka mid ah "waxyeello-side" dheeraad ah. Tusaale ahaan, adoo bedelaya IP-ga, waxay sidoo kale kuu ogolaan doontaa gal macluumaadka xaddidan ama xaddidan ee aaggaaga juqraafiga. Tusaale ahaan, waxaa hubaal ah inaad isku dayday inaad daawato kanaal ka socda waddan kale waxayna ku tusinaysaa fariin kuu sheegaysa in adeeggan uu heli karo oo keliya dadka isticmaala waddankaas. Hagaag, xaddidaadda noocaan ah waxaa looga fogaan karaa VPN…
lacag la'aan iyo lacag la'aan
Qaarbaa jira adeegyada VPN oo dhan oo bilaash ah, iyo kuwa kale ee la bixiyo oo bixiya adeegyo bilaash ah oo xadidan. Markaad tixgeliso isticmaalka VPN, waa sababta oo ah waxaad u baahan tahay ammaan ugu badan ama helitaanka adeegyada xaddidan ee agagaarkaaga. Taasina maaha wax ay tahay inaad ku aamino adeegyada bilaashka ah.
Mid ka mid ah sababaha ayaa ah in adeegyada bilaashka ah ay u muuqdaan inay leeyihiin ilaalin hoose laakiin, dhammaan ka sarreeya, sababtoo ah waxay leeyihiin xaddidaadda gaadiidka maalin kasta, toddobaadle ama bishiiba. Tani waxay kaa ilaalin doontaa inaad awood u yeelatid inaad si degdeg ah u isticmaasho kuwa bilaashka ah oo aan suurtagal ahayn baahinta adeegyada fiidiyaha ee cuna xog badan (gaar ahaan haddii ay yihiin HD ama 4K). Iyo waxa ka sii daran, adeegyada VPN ee bilaashka ah kuma oggola inaad la shaqeyso adeegyada qulqulka xaalado badan.
Sidaa darteed, markaad gasho mid ka mid ah adeegyada VPN ee bilaashka ah waxaad ku dambayn doontaa niyad jab oo ku dhamaata adeeg lacag bixin ah adigoon helin waxaad runtii rabto. Intaa waxaa dheer, adeegyada lacag bixinta maaha inay noqdaan kuwo qaali ah, ka fog, waxaa jira dalabyo casiir leh oo dhowr euro bishiiba kuu ogolaanaya inaad hesho adeegyo qaali ah.
VPN-yada aan jecelnahay
Laga soo bilaabo3, € 10
Laga soo bilaabo2, € 75
Laga soo bilaabo1, € 79
Oo xusuusnow waxay yidhaahdaan, marka wax xor ah, alaabtu waa adiga. Taasi waa, qaar ka mid ah adeegyada bilaashka ah ayaa u socda si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqaaga oo ay u isticmaali karaan inay ka iibiyaan qolo saddexaad, u muujiyaan xayeysiis sida aad doorbidayso, ama u hesho nooc ka mid ah soo celinta dhaqaalaha. Sidaa darteed, waxay bixiyaan adeeg bilaash ah, laakiin waxay faa'iido ka helayaan dhinaca kale ...
Adeegyada kale xitaa waa laga yaabaa iibin bandwidth macaamiisha kale ee adeegaaga lacag bixinta. Taasi waa, waxay isticmaalaan qayb ka mid ah agabkaaga si ay ugu wareejiyaan isticmaalayaasha leh akoon qaali ah.
Qof saddexaad ama VPN iska leh?
Waa run inaad awoodid samee VPN kuu gaar ah isticmaalka server leh GNU/Linux iyo OpenVPN (ama nidaamyada kale ee hawlgalka iyo software la mid ah). Laakiin nooca VPN wuxuu noqon doonaa xoogaa xaddidan marka la eego xawaaraha xawaaraha shabakadaada waana inaad adigu sameysaa adkeynta iyo maamulka, taas oo sidoo kale ay kujirto la tacaalida dhibaatooyinka farsamo ee ka imaan kara server-ka.
Tani ikhtiyaar uma aha inta badan isticmaalayaasha, xataa xitaa isticmaalayaal badan oo xirfadlayaal ah. Sidaa darteed, ugu raaxada qandaraas adeega VPN qolo saddexaad oo ku raaxayso raaxada ay bixiso. Xaaladdan oo kale, waxaad yeelan doontaa oo kaliya inaad ka walwasho rakibidda macmiilka oo aad bilowdo inaad ku raaxaysato adeegga laga bilaabo maalinta koowaad.
Ma tahay doorasho wanaagsan in la iibsado router VPN?
Waa run in sidoo kale ay jiraan qaar ka mid ah router, ama router, kuwaas waxay bixiyaan VPN horay loogu daray. Waa router-yada qaaliga ah oo inta badan qiimihiisu ka yara badan yahay celceliska, laakiin waxay bixiyaan faa'iidooyin aad u xiiso badan iyo adeegyo dheeraad ah. Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa tusaalooyin sida:
Ciyaaraha Linksys WRT32X
Inkastoo ay tahay doorasho weyn xaaladaha qaarkood, Waa inaad ka taxadartaa oo wata qaar ka mid ah moodooyinka VPN ee raqiis ah. Qaarkood waxay tilmaamayaan inay haystaan ​​adeeggan oo kale laakiin ay ula jeedaan macmiilka oo keliya, oo ay ka maqan yihiin adeegga uu bixiyo server-ka. Sidaa darteed, waa inaad sidoo kale qortaa adeeg dhinac saddexaad ah si uu u shaqeeyo.
Si aanad wax dhibaato ah u qabin, waxaanu samaynay ururinta router-yaasha VPN-ka ugu fiican ee aad geli karto adiga oo riixaya badhanka soo socda:
Fiiri VPN Routers
U fiirso tan! Qaar badan ayaa iibsada mid ka mid ah router-yadan oo waxay leeyihiin xasillooni maskaxeed, laakiin xogtoodu weli waa mid aan la ilaalin.
Sida badeecado iyo adeeg kasta, VPN waxay leedahay faa'iidooyin iyo khasaare. Laakiin hubaal faa'iidooyinka ayaa aad uga awood badan inay kugu qanciyaan inaad shaqaaleysiiso iyada:
Sirta gaadiidka shabakada si aan xogtaada loogu gudbin qoraal cad iyo in la ixtiraamo sirta (xogta ay isku gudbiyaan soo diraha iyo qaataha ma heli karaan qolo saddexaad fasax la'aan). Taasna waxaa ku jira dhammaan taraafikada guud ahaan, oo aan jeclayn server-yada wakiillada ee aad u habeyn karto biraawsarkaaga shabakad ama barnaamijyo gaar ah. Xaaladdan oo kale, dhammaan taraafikada qalabkaaga waa la ilaalin doonaa.
Qarsoodi weyn iyo qarsoodi. Ma aha oo kaliya sirta, laakiin sidoo kale qarinta asalka IP-ga.
Ka gudub xaddidaadaha deegaankaaga juqraafi iyadoo la isticmaalayo IP laga keenay waddamo kale kaas oo adeegaasi u shaqeeyo xad la'aan.
Bixiyahaaga internetka ama ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,…) ma awoodi doonaan inay ogaadaan isticmaalka aad ka samayso xidhiidhkaaga. VPN la'aanteed waxay awood u yeelan doontaa inay ogaato boggaga aad booqato, haddii aad soo dejiso waxyaabaha budhcad-badeedda ah, iwm. Tani waa sidaas maadaama dhammaan taraafikada ay mari doonaan server-kooda oo diiwaanka uu ahaan doono. Intaa waxaa dheer, sharcigu wuxuu u baahan yahay ISP inay kaydiso xogtaas dhowr sano. Dhammaan xogtan waxaa la iibin karaa ama loo wareejin karaa shirkadaha xayeysiiska, hay'adaha dawladda, iwm.
daacadnimada xogta, si marka ay yimaadaan meeshii ay u socdeen ay u noqdaan kuwii asal ahaan ka soo tagay. Taasi waa, laguma beddelo jidka.
VPN waa mid aad u fudud, mararka qaarkoodna waxay ku lug leedahay oo kaliya riixitaanka badhanka si loo bilaabo ama loo joojiyo. Taa beddelkeeda, adeegyada kale ee ka duwan sida server-yada wakiillada, iyo tallaabooyin kale oo ammaan oo kala duwan, waxay macnaheedu noqon karaan kakan.
Badbaadinta. In kasta oo ay leedahay qiimo, haddana aad ayuu uga hooseeyaa adeegyada kale ama lacagaha la siiyo khubarada ammaanka ee sugi kara shabakadda.
Hubaal VPN ma laha dhibco diidmo ah aad u cajiib ah. Laba qodob oo kaliya ayaa lagu iftiimin karaa ficilka lidka ku ah:
Price: In kasta oo ay jiraan kuwo xor ah, haddana hore ayaan uga faallooday inaysan ahayn kuwa ugu habboon. Sidaa darteed, si aad u hesho VPN wanaagsan waxaad u baahan tahay inaad bixiso. Si kastaba ha ahaatee, ma aha qiimo sare oo waa loo ogol yahay dadka badankiisa. Router-ka leh VPN waxa kale oo aad ka fogaan kartaa khidmadahan…
Xawaaraha isku xirka: Sida iska cad, marka xogta la siraynayo, waa in la sideeyaa oo la furfuraa si aad u aragto in aanad lahayn VPN. Taasi waa, xitaa haddii ay kuu caddahay, laakiin taasi waxay u maleyneysaa culeys dheeraad ah oo yareyn doona xawaaraha. Haddii aad leedahay ADSL degdeg ah, fiber optic, ama khadka 4G/5G, dhib badan ma noqon doonto. Waxa kaliya oo ay dhibaato ku noqon kartaa xidhiidhada gaabiska ah (ama marka aad haysato nooc ka mid ah xogta xaddidan oo ay hoos u dhigto inta ka hadhay bisha).
Maxaan ugu baahanahay VPN?
Isku day NordVPN
Waa inaad qiimeysaa haddii haysashada VPN ay macno uun ka samaynayso kiiskaaga gaarka ah. Mabda 'ahaan, asturnaanta iyo amniga sababo kali ah, waa u qalantaa. Dhab ahaantii, sirnimadu waa xuquuq ku jirta shabakadda oo ay maalin kasta ku xad gudbaan shirkadaha waaweyn. Adigoo isticmaalaya VPN waxaad xal u gelin kartaa tan. Laakiin iyadoon loo eegin tan, waxaa sidoo kale jira kuwo kale Sababaha aad ugu baahan tahay VPN:
SARS-CoV-2: Faafida ayaa bedeshay bulshada oo waxay beddeshay hab-dhaqanka siyaabo badan, sidoo kale goobta shaqada. Hadda waxaa jira shirkado kale oo badan iyo kuwa iskood u shaqeysta oo teleefoonka ka shaqeeya. Tani waxay ku lug leedahay isticmaalka qalabkaaga si aad isugu xidho (eeg BYOD) iyo shabakada gurigaaga. Shirkado badan ayaa gacanta ku haya xogta macaamiisha xasaasiga ah (xogta canshuurta, sawirada gaarka ah, macluumaadka lagu ilaaliyo hantida garaadka, xogta caafimaadka,…) la'aanteed VPN-ga waxay u nuglaadaan in ay dhexgalaan cid saddexaad oo aan la ogalayn.
Ilaali xogtaada daalacashada: VPN-ka waxaad haysataa lakab dheeraad ah oo ilaalin ah sidaan ku sheegay qodobkii hore. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay marka aad isticmaasho isku xirka WiFi ee dadweynaha ama aan sugnayn si aad u gasho adeegyada bangiyada qaarkood, iwm, iyada oo aan kuwa kale awood u yeelanayn inay farageliyaan furaha sirta ah iyo nooca kale ee aqoonsiga ama xogta la geliyo.
In laga gudbo faafreebka internetka: Haddii aad la kulanto adeeg ama app aan laga heli karin deegaankaaga, VPN-ka waxaad ku geli kartaa adigoo ka soo qaadanaya IP-ga waddan kale. Tani waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah si aad u daawato qaar ka mid ah kanaalada khadka tooska ah, helitaanka macluumaadka aan laga heli karin aaladaha qulqulka qaarkood (AppleTV, Netflix, Disney+, F1 TV Pro,...), iyo xitaa abka xaddidan ee Google Play, App Store, iwm iwm.
Soo dejinta P2P iyo Torrent: si aad u soo dejiso macluumaadka shabakadaha Torrent ama P2P, iyo mareegaha kale ee lagu soo dejiyo waxyaabaha budhcad-badeedda ama sharci-darrada ah, waxaad ku xisaabtami kartaa VPN-ka inuu u sameeyo si qarsoodi ah iyo in ISP-gu aanu ka warqabin hawshan. In kasta oo ay tani tahay sharci-darro oo aad samayn doonto khatar adiga kuu gaar ah…
Sida aad arki karto, codsiyada VPN ayaa tagaya ka baxsan ammaanka fudud...
Maxaan u baahanahay inaan ogaado si aan u doorto VPN-ka ugu fiican?
Waxaa jira qaar faahfaahinta farsamada waa inaad isha ku haysaa gaar ahaan marka aad is barbar dhigayso qaar ka mid ah adeegyada VPN oo aad ka shakisan tahay. Waxay noqon karaan tilmaame wanaagsan si loo go'aamiyo tayada adeegga iyo haddii ay ku habboon tahay baahiyahaaga.
Tirada adeegayaasha iyo IP
NordVPN AES-256 Soomi Laga soo bilaabo 59 waddan 6 isku mar Soo bandhigid
CyberGhost AES-256 Soomi Laga soo bilaabo 90 waddan 7 isku mar Amniga
Surfshark AES-256 Soomi Laga soo bilaabo 61 waddan Aan xadidnayn Qiimaha
ExpressVPN AES-256 Wanaagsan Laga soo bilaabo 94 waddan 5 isku mar Tayada adeegga
ZenMate AES-256 Wanaagsan Laga soo bilaabo 74 waddan Aan xadidnayn
kulkulul Shield AES-256 Soomi Laga soo bilaabo 80 waddan Qalabka 5 Xawaare
TunnelBear AES-256 Wanaagsan Laga soo bilaabo 22 waddan Qalabka 5 Adeeg farsamo
Dabada iga qari! AES-256 Soomi Laga soo bilaabo 190 waddan 10 isku mar Aad ugu fiican P2P iyo soo dejinta Torrent
ProtonVPN AES-256 Wanaagsan Laga soo bilaabo 46 waddan 10 isku mar Ku habboon isticmaalka Netflix
PrivateVPN AES-256 Wanaagsan Laga soo bilaabo 56 waddan 6 isku mar Ikhtiyaarka wanaagsan ee qoysaska
Adeegyada VPN qaarkood waxay leeyihiin tiro badan oo server ah oo ku baahsan dalal dhowr ah, taas oo noqon doonta faa'iido cad. Intaa waxaa dheer, qaar ayaa ku siinaya a IP kala duwan random, laakiin adeegyada kale ayaa sii socda oo kuu ogolaanaya inaad doorato asalka IP-ga la sheegay.
Tani waxay aad u xiiso badan tahay adeegyada ama waxa ku jira xaddidan. Tusaale ahaan, ka soo qaad inaad rabto inaad hesho adeeg Iswiidhan keliya laga heli karo. Mid ka mid ah VPN-yadaas waxaad ku heli kartaa IP-ga Iswidishka oo markaa waxaad geli kartaa sidii adigoo qof iswiidhish kale ah...
Waa mid ka mid ah xogta ugu muhiimsan ee loogu talagalay amniga ka adeega. Waxay sidoo kale saameyn kartaa waxqabadka. Sida iska cad, inta badan ee aaminka ah ayaa xawaaraha badan ee aad lumin doontaa, in kasta oo qaar ka mid ah adeegyada VPN ee tayada leh ay ku maareeyeen tignoolajiyada qaar si aanay taasi xaaladdu u dhicin oo waxay ku siin karaan xawaare aad u wanaagsan iyo ammaan.
Mar kasta oo aad doorato VPN, waa inaad doorataa mid leh algorithm sir xoog leh oo aan lahayn nuglaanta la yaqaan. Mid ka mid ah kuwaas Algorithms waa AES-256taas oo ah doorasho weyn. Dhab ahaantii, adeegyo badan oo lacag-bixineed ayaa doorta ilaalinta darajada millatariga, taas oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya ee la heli karo.
Marka laga reebo sirta, adeegyada lacag bixinta qaarkood waxay leeyihiin tignoolajiyada ilaalinta dheeraadka ah ama tallaabooyinka macaamiishooda. Laakiin sida ay noqon karto, iska ilaali algorithmsyada aan sugnayn sida SHA-1, MD4, iyo MD5 ee lagu xad gudbay.
Xusuusnow, ma jiro 100% nidaam sugan. Waxa ugu khatarsan waa in aad rumaysatid in aad tahay mid aan nugulayn. Dhab ahaantii, qaar cybercriminals Waxay awoodeen inay jebiyaan isku-xiryadan iyagoo ka faa'iidaysanaya nooc ka mid ah dayacanka ama hababka kale ee khiyaanada ah sida tuugada muhiimka ah.
Waa mid kale oo ka mid ah xogta ugu muhiimsan haddii aadan rabin in VPN uu niyad jabiyo xawaaraha shabakada si mug leh. Sidaa darteed, had iyo jeer waa inaad doorataa adeegyo leh xawaare wanaagsan. Qaar badan oo ka mid ah adeegyada hadda jira waxay bixiyaan adeegyo leh xawaare aad u sarreeya, markaa dhib badan ma noqon doonto, gaar ahaan haddii aad isticmaasho xidhiidh degdeg ah (ADSL, fiber optics,...).
Asturnaanta iyo qarsoodiga
Uma jeedo shabakada lafteeda, laakiin xogta uu bixiyaha adeegga VPN laftiisu kaydin karo. Sidaan horay u soo sheegay, xogtu ma soo mari doonto server-yada ISP-da, laakiin waxay sii dhex mari doontaa kuwa ka mid ah Bixiyaha VPN.
Qaar ka mid ah bixiyayaasha kaydi xogta log sida magacaaga, faahfaahinta lacag bixinta, IP-gaaga dhabta ah, iwm. Xog kaa caawin karta in lagu aqoonsado Taas ayaa lagula talinayaa, marka waa inaad akhrido daabacaadda ganaaxa ee ku saabsan in bixiyayaashan ay keydiyaan xogtan iyo in kale. Ka digtoonow kuwa xafida oo had iyo jeer dooro kuwa kaydiya diiwaanka ugu yar.
Qaar ka mid ah adeegyada VPN ee bilaashka ah ayaa ka maqan adeegga farsamada ama macaamiisha ama aad u liita. Marka laga hadlayo adeegyada lacag-bixinta, tani inta badan way ka yara wanaagsan tahay iyo 24/7 (24 saacadood iyo 7 maalmood usbuucii), laakiin isku mid maaha dhammaan kiisaska.
Adeegyada qaarkood waxay bixiyaan dareenka kaliya Ingiriisi, kuwa kale ayaa sidoo kale ku yeelan doona Isbaanishka. Caadi ahaan labadaba waxaa lagu soo wacaa taleefoon iyo iimayl, qaarna xitaa waxay ku leeyihiin sheekeysi toos ah si ay uga jawaabaan su'aalahaaga ama u xalliyaan dhibaatooyinka suurtagalka ah ee soo bixi kara.
Taageerada ama goobaha
Adeegyada VPN ee bilaashka ah waxay leeyihiin xoogaa taageero ah, laakiin inta badan kuwa la bixiyo waxay leeyihiin taageero weyn marka la eego meelaha la taageero. Adeegyadani waxay leeyihiin barnaamijyo macmiil ah oo lagu rakibi karo nidaamyada kala duwan ee hawlgalka sida Windows, macOS, Linux, Android, iOSiwm. Qaarkood xitaa waxay ogolaadaan in lagu sameeyo TV-yada caqliga leh qaarkood iyo daalacashada iyada oo loo marayo add-ons.
Si fiican u eeg nooca nidaamyada hawlgalka ee aad ku isticmaasho guriga ama shaqada oo had iyo jeer dooro bixiye VPN ah oo ku siin kara a macmiilka rasmiga ah waa la taageeray.
Macaamiishaas aan kaga hadlayo qaybta hore waxay leeyihiin interface garaaf ah oo noqon kara wax ka badan ama ka yar saaxiibtinimo. Badana way fudud yihiin oo uma baahnid wax xirfado kombuyuutar ah si aad u shido VPN-ka ama aad u samayso goobo gaar ah.
Caadi ahaan way fududahay sida socodsiinta macmiilka VPN iyo Riix badhan si adeeggu u hawl galo oo uu bilaabo inuu sameeyo "sixirkiisa".
Adeegyada VPN ee lacagta ah waxaad ka heli kartaa siyaabo dhowr ah oo lagu bixiyo rukunka. Hababkan lacag-bixineedku waxay noqon karaan dhawr:
Kaarka deynta: Waa raaxo iyo caadi isticmaalayaasha badidood.
PayPalGoobaha qaarkood ayaa sidoo kale aqbalaya lacag bixinta goobtan sugan oo aad u baahan tahay kaliya iimaylkaga.
Dukaamada App-ka: Qaar ka mid ah VPN-yada aaladaha mobilada waxay ogolaadaan lacag bixinta adeegyada lacag bixinta ee dukaamada app-ka ee aaladaha mobilada, sida Google Play, App Store, iwm.
Xawaaladaha: lacagaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' waxay ogolaadaan lacag-bixinno aan qarsoodi ahayn, sida kuwa lagu sameeyo Bitcoin. Bixiyeyaal badan oo VPN ah ayaa taageera noocaan lacag bixinta cryptocurrency.
kuwa kale: Qaar ayaa sidoo kale taageera habab kale oo kala duwan.
Waxaa laga yaabaa in ereygu uusan garaacin gambaleelka DMCA, laakiin waa erey tilmaamaya sharciga ilaalinta xuquuqda daabacaada ee Maraykanka. Sharcigan ayaa ka ilaalinaya dhammaan noocyada waxyaabaha sida filimada, muusiga, software-ka, buugaagta, iwm.
Oo maxay tani ka leedahay VPN-ka? Waa sahlan tahay, qaar ka mid ah bixiyeyaasha VPN waxay xaruntooda ku leeyihiin waddamo leh sharciyo aan ka fikirin ka jawaabista codsiyada Maraykanka marka wax khiyaano ah la sameeyo. Taasi waa, waxay ku jiraan meelo sharci ah kuwaas oo ilaaliya macaamiishooda haddii xogta la codsado in la xukumo.
Laakiin dhammaan adeegyada VPN kuma shaqeeyaan jannada noocan oo kale ah oo ka baxsan sharciyadan, qaarkood waxay ku sugan yihiin dhul ay ku shaqeeyaan Codsiyadaas waa la dejin doonaa.. Markaa haddii aad VPN-kaaga u isticmaasho fal-dambiyeedka, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa tan. Si kastaba ha ahaatee, blog-kan kama dhiirigelinayno isticmaalka been abuurka ah…
1 10ka VPN ee ugu sarreeya
2.0.0.1 U istaago dalacsiinteeda
3.0.0.1 Waxay u taagan tahay ammaankeeda
4.0.0.1 Waxay u taagan tahay qiimaheeda
5.0.0.1 Waxay u taagan tahay tayada adeeggeeda
6.0.0.1 Waxay u taagan tahay tayada-qiimaheeda
7 kulkulul Shield
7.0.0.1 Lagu xusay xawaaraha
8.0.0.1 Waxay u taagan tahay adeeggeeda farsamada
9 Dabada iga qari!
9.0.0.1 Aad ugu fiican P2P iyo Torrent
10.0.0.1 Ku habboon isticmaalka Netflix
11.0.0.1 Ikhtiyaarka wanaagsan ee qoysaska
12 Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato VPN
12.1 Waa maxay VPN?
12.2 lacag la'aan iyo lacag la'aan
13 VPN-yada aan jecelnahay
13.1 Qof saddexaad ama VPN iska leh?
13.2 Ma tahay doorasho wanaagsan in la iibsado router VPN?
13.3 Faa'iidooyinka isticmaalka VPN
13.4 Khasaaraha VPN
13.5 Maxaan ugu baahanahay VPN?
14.0.0.1 U istaago dalacsiinteeda
15 Maxaan u baahanahay inaan ogaado si aan u doorto VPN-ka ugu fiican?
15.0.5 Waad salaaman tahay VPN
15.0.6 kulkulul Shield
15.0.12 Taabo VPN
15.1 Tirada adeegayaasha iyo IP
15.2 Nidaamka sirta
15.4 Asturnaanta iyo qarsoodiga
15.5 taageero farsamo
15.6 Taageerada ama goobaha
15.7 GUI saaxiibtinimo
15.8 Hababka lacag bixinta
15.9 Codsiyada DMCA
VPN-yada ugu fiican
VPN bilaash ah
VPN loogu talagalay Android
VPN ammaan ah 2022 - Siyaasadda Asturnaanta - Macluumaadka ku saabsan buskudka